Budata Wallpapers for Whatsapp APK maka Android
Budata Wallpapers for Whatsapp
Budata Wallpapers for Whatsapp,
Akwụkwọ ahụaja Maka ngwa WhatsApp so na ngwa efu nke ndị ọrụ ama gam akporo nwere ike iji mee ka ngwa izi ozi WhatsApp ha na-ahazi nke ọma. Ngwa ahụ, nke na-enye ọnụ ọgụgụ akwụkwọ ahụaja buru ibu na interface dị larịị ma dị mfe, na-enyere gị aka ile ihuenyo ahụ nke ọma ka ị na-aga nihu na mkparịta ụka gị na ndị enyi gị.
Ịkwesighi iji otu foto na foto oge ọ bụla, ekele maka mmụba na mgbanwe nke foto desktọpụ na ngwa na mmelite. Nihi ya, ọ na-ekwe omume na-enwetaghị mgbanwe ọnọdụ na oge a ahịrị na WhatsApp.
Ọ dịghị mkpa imechi ngwa ma ọ bụ pụọ na ngwa ịgbanwe akwụkwọ ahụaja na WhatsApp. Tụkwasị na nke ahụ, enwere m ike ịsị na ịdị mfe nke iji ya dị elu nihi njirimara ndị dị ka eziokwu ahụ bụ na foto ndị dị ugbu a na-amasị onye ọ bụla na e nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche dị ka mgbagwoju anya, dị mfe, agba, agba, enweghị agba, vivid, pastel. na akwụkwọ ahụaja ka edepụtara nokpuru ụdị dị iche iche.
A na-ebudata akwụkwọ ahụaja ejiri na ngwa ahụ na-akpaghị aka mgbe emepere ngwa ahụ, yabụ anaghị m akwado itinye ngwa ahụ na njikọ 3G. Nihi na nbudata ọnụ ọgụgụ buru ibu nke akwụkwọ ahụaja ga-ewe oke nke ịntanetị 3G nnukwu ego. Nezie, ị nwere ike ibudata ya ngwa ngwa mgbe ejikọrọ site na netwọk Wi-Fi.
Wallpapers for Whatsapp Ụdịdị
Akwụkwọ ahụaja WhatsApp bụ ngwugwu akwụkwọ ahụaja WhatsApp na -enye ndị ọrụ ohere ịme nzụlite nke...
Akwụkwọ ahụaja Maka ngwa WhatsApp so na ngwa efu nke ndị ọrụ ama gam akporo nwere ike iji mee ka...